> Resource > iPod > Sida loo Daawo Movies on iPod taabashada
Ma soo bixi filimada internetka qaar ka mid ah, oo hadda raba inay iyaga u ciyaari xidhiidho iPod ah? Nasiib darro, filimada la ma ciyaari karo sababo la xiriira qaabab karin? Ha welwelin. Halkan waa xal wanaagsan. Just halkan ka fiiri: Wondershare TunesGo (Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Labada nooc oo barnaamijkan ku siin awood u leeyahay inuu ku daro oo aanay filimada ka computer si iPod taabashada aan ku xirid ah. Ka dib markii in, waxaad daawan kartaa filimada on iPod taaban to content wadnahaaga.
Download barnaamijka in ay isku dayaan daawashada filimaanta on iPod taabto.
Fiiro gaar ah: The version Windows - Wondershare TunesGo taageertaa diinta iyo daawashada filimaanta on iPod xiriiri 3/4/5 socda macruufka 5 / macruufka 6 / macruufka 7 / macruufka 8 / macruufka 9. Mac version aad u saamaxaaya in ay daawato videos on iPod xiriiri 5 / 4 in ay maamulaan macruufka 5, macruufka 6, macruufka 7, macruufka 8 & macruufka 9.
Sidee si ay u daawadaan filimada on iPod taabashada
Labada qeybood oo aad si fiican u shaqeeyaan. Qaybtan, waxaan jeclaan lahaa inaan idiin sheego sida uu u daawado filimada aad iPod xiriiri version Windows ah.
Tallaabada 1. Ku rakib oo ay maamulaan TunesGo
Hadda, rakibi TunesGo iyo waxa maamula kombuutarka. Isku xiriiri iPod in ay PC ka via USB Cable la xiriiri iPod soo socda. Ka dib markii la aqoonsan yahay, aad iPod taabto waxaa soo bandhigay in uu furmo suuqa ugu weyn.
Tallaabada 2. Watch videos on iPod taabashada
In galeeysid bidix, guji "Media". Hadda, aad arki doonaa qaar ka mid ah isha on line ugu sareeya, kuwaas oo, Music, Movies, Podcasts, TV muujinaysaa, Lugood U, Music Videos, audiobook. Halkan waxaan ku filimada qaado sida tusaale. Guji "Movies" si ay u muujiyaan suuqa kala filimka.
Ka hor inta gelinaya filimada bixi on your iPod taabto, ogolaanaysaa 'dhigay tayada diinta video. Dhinaca geeska kore ee midigta, guji icon 2aad si ay u muujiyaan menu jiido-hoos. Dooro "Meeshay"> "Video Conversion". Dooro nooca tayada jeceshahay. Markaas, guji "OK" si ay u dhamaystiraan goobta.
Markaas, ku soo laabtay suuqa kala filimka. Riix saddexagalka "Add" hoos. Ama dooran "Add File" ama "Add Folder". Browse your computer si aad u hesho filimada ama folder movie. Markaas, guji "Open" si ay u dar. Marka qoraal ah soo booda, oo kuu sheegaysa in ay filimada ku daray ma aha in iPod taaban qaabab saaxiibtinimo, waxaad riixi kartaa "Haa" si loogu badalo filimada ee MP4.
Fiiro gaar ah: Wondershare TunesGo taageertaa badalo 3GP, MP4, Mpg, MPEG, DAT, MOV, AVI, FLV, iwm Fadlan hubi qaabab videos taageero dheeraad ah halkan.
Markaas, barnaamijkan uu bilaabo inuu badalo filimada ka. Ka dib markii diinta, filimada, kaasaa badbaadi doona aad iPod taabto. Xusuusnow in aad iPod taabashada ku xiran ka hor inta diinta ka dhamaado.
Hadda, filimada waa aad iPod taabto. Tubada "Videos" aad iPod taabto. Raadi filim aad u jeclaan lahaa in ay daawadaan. Markaas, raaxaysan filimka si farxad leh.
Isku day TunesGo in aad ogaato sida ay u daawadaan videos on iPod taabto.
Sidee inuu ka soo kabsado Music ka iPod shaandheyn
Sida loo dar Videos in iPod nano Effortlessly